Qabeenya Namoota dhunfaa fi uumata maqa jeequmsan kan guba jiru Mootummaa dha.
Qabsa’oota Maraaf yakka TPLF Ijoole Oromoo irrati dalaga jirtu hunda qabataman galmeesun bakka hundati falmachuun barbachisadha Oduu nu ergitan garuu qabatama ta’uu qaba. Duggan keenya ga'aa waan ta'ee waan nama dogogersuu waan siiri hin tanee nama dabarsuu nu midha malee nu hin fayyadu, yaakaa wayyanen dalagdu siirti qoorchuun nu dabarsa.
Wayyane TPLF Security ykn Tika ishee bobaftee mana nama gubuun Oromoo qulquluu hidha oltee, Oromoof fi Abbootin seeera kana beekuu qabu. Manatiin Gimbi keessati gubamee hundi Harka wayyanen kan raawwatamee fi Oromoof Amhara walti busuuf jeecha kan dalgamee ta'uu isaa ragga qabna. Ijoole Oromoo kan ajesisesi kan Mana jara gubisisa tureesi Wayyanedha. Mootumman Wayyane Godiina Adda Oromiya Murachuu yaalin gaafiin baratoota Oromiyya keessa akka ka’uu goodhe jira. Gaafi Baratoota fi ummataafi deebi kana naggan deebisuu utuu danda’uu Waraana Ittisa biyya, Agazii fi Polisa federala bobasun Rasassa lubu balesuun fi humnan ukamsuu yaalun isaa yaakaa 2faa dha. Erga jeequmsii ka’ee amoo Mootumman wayyanee Tikka isaa bobasuun Baratoota fi Uumataa fakeesee gamoo adda adda fi mana dalgala gurgurda, Konkolata fi Hotelota akka Adde Ababech Matafariya gubun dirama hojeechuuf jeecha yakka raawatee jira. Mootummaan kana hunda dalga kan jiru, tokkofa Adeemsa Gafii uumata kana kara irra dubsuuf, 2faa, Uumataa giduuti wal dhabdii fi wal shakii uumuuf, 3faa Keessa keesa qabeenya namoota barbadeesuuf, Kanan wal qabsisee namoota hidhuu barbaduu qabee hidhuuf jeecha yakka kana dalaga jira.
1faa. Oromoon Gaafi miriga gegesa utuu jiru namichi degeran Wayyane namni AXINAAFUU jedhu lafaa ka'ee mucaa tokko ajjeesee fi konteeynerii keessatti dalalaa turan elektiriikaan maassaa godhanii nama miidhii isaatiin dubbiin ka'uu isaati ijooleen mormii Mootuumaa irrati gegesa jirtu dhiftee namicha kana waliin mormiiti jalaqabdi. Namii kun waan isaa hin galchine keessa galee Shugutii mootumman isaa hidhachiseen Oromoo ajeesun isaa degera mootuma ta’uu isaa argisisa jeechun Uumataa dalansisuyu isaati. Kana malee Mootuuman Ethiopia lammi Oromoo hunda Meesha gosa hunda kan hikachisee namicha kana maliif akka hidhachisee nama ajeesisuu uumani gaafacha jira. Namicha kana warii hidhachisa lubu Oromoo baleesisan ilee akka itti gafataman gaafacha jira.
2faa Yakka Ambo Hotela Abbabech if Namootya birra irrati badinsa qaqabee hunda kan dalage Mootumma Ethiopia ta’uu isaa ragga ga’aa qaban, Sababin keenya ini gudaan Uumani Ambo Ababech Hotel ija gariin waan ilaaluuffi jalatuuf mootumman TPLF ta’eef mootumman TPLF yakka kana dalagee, kara birra amoo Adde Abbabechi uumata jalatuu kana irrati abdii akka dhabduuf, jaalala ummataaf qabu sun akka jibbatti jijiramuuf, degersa tokko ilee uumataa amboof akka isheen hin goone goochuf jeedhan Securty amanamoo ta’aan Hotela kana ergan barbadeessa turan. Ummatii heedun ilee Qabeenyan Abebechi maliif balessan jeedhe qabsoo kana irrati shakii akka goodhuf jeecha Wayyanen Hotela Addee Abebechi midha irran ga’uu dhan dirma hojeecha ture. Yeero yakki kun rawwatamuu ilee Vedio kassa turan. Abba dula gamada Oromoon adda basuuf deram isaan irrati hojeeta jiran ilee kan adde abbabechin wal fakata. Oromoo irrati yakka Tigiren Hojecha jirtu beeku qabdu. Hotela Adda Ababechi kan barbadeese wayyane fi ergamtoota isssan OPDO dha malee uumata Ambo akjka hintanee ragga qabna. Magala Gimbi keessati Oromoo nama ta’ee hunda qabani akka hidhaman goochun, baratota Qormata biyoolessa qaban akka hin qoratamine gochuun hidhun, baratoota Oromoo beeka midha jiru, uumanii Oromoo yakka kana hunda tokko tokkon galmese falami isaa itti fufu qaba.
3faa Hiriira nagga Baratooton Oromoo University Jimmaa, Wellega, Madawalabuuti lubu baratoota Oromoo galafatee hirriira kana nagga deema ture malee waan to’aana jala bayee Homna Polisi Federla fi waraana Ittisa biyya gaachisee miti. Mootuimman Wayyane Ijoolen Tigiray Heera federla biyyati gutuman gutu lola uumataa nagga irrati banafi gafatamuu qabu.
4faa Bombi Haromayya University keessati dhoyee kan dhosan Lammi Tigray kan ta’eef fi Uniform Polisi Federala ufachuu seene akka dhosee beekamada. Ergasi boodasi ijoole Nanno Tigray 3 ta’aan boonmbi dhosuuf utuu yaalan qabamun isaan ragga qabatama qabna. Ijoole kun yeero lamafafi dhosuuf utuu adeeman qabaman, to’ana jala olani qooratamuu utuu qaban guyyama sun Finfinnee akka adeeman goodhaman? Maliif? Oromiyyan yaakka nannoo isaati goodhamuuuf mirga hin qabani?. Ethiopian Heera federalan erga bulti ta’ee Naggenya Oromiyya kan eguu qabu Polisi naanno Oromiyya qaoofa, Polisiin Federla Wajjira Federala fi Gumuruka Federala qoofa to’achuu qaba, Waranai Federlana Danga biyyati to’achuu fi eguu qaba malee University keessa seene ijoole meshaa tokko hin qabnee rasasan ajeesuu dirqisisee shamaran gudee hin qabu. Yaaki kun hundi Galamyee Mana murti adunya fi mana murti uumataa Oromooti gaafa tokko akka dhiyyati shakii hin qabnuu.
Links: Gaafi fi Dhadannoo Hiriira Nagga Baratoota Oromoo Yuunbarsitii adda adda irra dhiyacha jiru.